RW hore ‘Kheyre’ iyo Guddoomiyihii hore BF Somaliya ‘Jawaari’ oo ku kulmay Muqdisho | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh RW hore ‘Kheyre’ iyo Guddoomiyihii hore BF Somaliya ‘Jawaari’ oo ku kulmay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa Talaadadii maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kula kulmay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan (Prof. Jawaari).
Wararka ayaa sheegaya, in labadan mas’uul ay kawada hadleen xaaladda Siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu yahay Musharrax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Si kastaba, xukuumaddii uu hoggaaminayay Kheyre ayaa Jawaari ku riday sifo dadka qaar ay sheegeen in ay baalmarsaneyn Sharciga dalka, waxaana la sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeyay aysan ka dhaxeyn labadda mas’uul xiriir wanaagsan.
Kheyre iyo Jawaari oo Muqdisho ku kulmay